Vaovao - Niakatra 1,1% isan-taona ny isan-taona ny varotra fiara eropeana tamin'ny volana septambra: ACEA
Ny fisoratana anarana fiara eropeana dia somary nisondrotra tamin'ny volana septambra, ny fiakarana voalohany tamin'ity taona ity, ny angon-drakitra indostrialy dia naseho tamin'ny zoma, nanolo-kevitra ny fanarenana ny sehatry ny fiara any amin'ny tsena eropeana sasany izay ambany kokoa ny aretina coronavirus.
Tamin'ny volana septambra, ny fisoratana anarana fiara vaovao dia nitombo 1,1% isan-taona isan-taona ho fiara 1,3 tapitrisa ao amin'ny Vondrona eropeana,
Angletera sy ny firenena Association Free Trade Association (EFTA), asehon'ny antontan'isa avy amin'ny Fikambanan'ny Mpanamboatra Fiara Eraopeana (ACEA).
Ny tsena dimy lehibe indrindra any Eropa kosa dia namoaka valiny samihafa. Espaniôna, Fanjakana Mitambatra ary Frantsa dia nitatitra ny fatiantoka, raha nitombo kosa ny fisoratana anarana tany Italia sy Allemana, naseho ny angona.
Ny varotra Volkswagen Group sy ny Renault dia nitombo 14,1% ary 8,1% tamin'ny volana septambra teo, raha nitontona 14,1% kosa ny PSA Group.
Ireo mpamily lafo vidy dia namoaka fatiantoka tamin'ny volana septambra niaraka tamin'ny fivarotan'i BMW 11,9% ary nitifitra 7.7% ny mpifaninana tamin'i Daimler.
Tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny taona dia nihena 29,3% ny varotra satria ny fanidiana ny coronavirus dia nanery ireo mpanao fiara hanidy efitrano fampirantiana manerana an'i Eropa.
Fiasa sy andraikitra
Ny mpitroka tampoka dia napetraka eo anelanelan'ny vatan'ny fiara sy ny kodiarana, miaraka amin'ny loharano. Ny fahamendrehan'ny lohataona mando amin'ny lohataona dia avy eny ambonin'ny arabe, na izany aza, mahatonga ny fiara hihozongozona izany noho ny toetrany mahazaka. Ny ampahany manosika ny fikorontanana dia antsoina hoe "shock absorber", ary ny hery fanoherana viscous dia antsoina hoe "force damping".
Ny mpitroka Shock dia vokatra manakiana izay mamaritra ny toetran'ny fiara, tsy amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiara ihany fa amin'ny fiasa mifehy ny fihetsika sy ny fahamarinan'ny fiara.
Hood Shock Absorber, Hub misy kodiarana, Knuckle familiana eo aloha, Tyre Ball Joint, Shock Absorber fingotra, Shock Absorber Bolt,